हीरा बन्ने रोचक कथा र अमूल्य निलो हीराको रहस्य !
काठमाडौँ । यो संसारमा अरबौं वर्ष पहिले हीरा बनाइएको थियो । आज यी मध्ये केही हीराको अनन्त प्रेमको प्रतिज्ञा र तिनीहरूलाई समृद्धि र विलासिताको प्रतीकको रूपमा हेरिन्छ ।
पुरातन समयमा, तिनीहरूलाई आरामदायी मानिन्थ्यो । यिनको प्रयोगले शक्ति मिल्छ भनिन्थ्यो । अहिले पनि हीराले शत्रु, दुष्ट र दुःस्वप्नबाट जोगाउछ भन्ने आम मान्यता रहेको छ ।
हिराको बारेमा वेदहरूमा पनि उल्लेख गरिएको छ । तिनीहरू हिन्दू देवता र देवीहरूको मनपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । ८६८ ईस्वी को बौद्ध धर्मसंग सम्बन्धित 'डायमंड सूत्र' अनुसार, हीरा एक यस्तो वस्तु हो जसको माध्यमबाट तपाईं सांसारिक भ्रममा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ र वास्तविक र शाश्वत चीजहरूमा प्रकाश पार्न सक्नुहुन्छ । तर यो सम्भवतः पुरातन ग्रीसमा सबैभन्दा राम्रो व्याख्या गरिएको छ । ग्रीकहरूले तिनीहरूलाई परमेश्वरको आँसु भने वा तिनीहरूलाई आकाशबाट खसेको ताराहरूको टुक्रा ठानेका छन् ।
हीराको बारेमा सबैभन्दा अचम्मको कुरा यो हो कि यसको सत्यता असाधारण छ । यससँग सम्बन्धित मान्यताहरू पनि अद्वितीय रहेको पाइन्छ ।
हीरालाई किन ‘फ्यान्टेसी’ भनिन्छ ?
जुन तत्वबाट हीरा बनिन्छ, त्यही तत्व जीवनको आधार पनि हो र यो तत्व कार्बन हो । हीराहरू असाधारण रूपमा कडा हुन्छन् । उनीहरूमा जन्मेको परिस्थितिमा भारी दबाब सहन सक्ने क्षमता हुन्छ । तैपनि, यदि हाइड्रोजन र तापक्रमको सही संयोजन हो भने, यो कार्बन डाइअक्साइडको रूपमा पनि उड्न सक्छ । हीराहरू असाधारण रूपमा उज्यालो र चम्किलो हुन्छन् । तर यो पनि धेरै कठिन छ । तिनीहरू गर्मीको सबै भन्दा राम्रो कन्डक्टर हुन् । तापक्रमको कारण तिनीहरूको आकार धेरै कम परिवर्तन हुन्छ । यो क्षारीय र अम्लीय रसायनहरुको लागि पनि निष्क्रिय छ । गहिरो पराबैंगनी किरणहरूको कारण, यो पारदर्शी हुन्छ । यो केहि ज्ञात वस्तुहरू मध्ये एक हो जसमा नकारात्मक इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ ।
तिनीहरू यस पृथ्वीमा धेरै थोरै ठाउँहरूमा प्राकृतिक रूपमा बनेका छन् । तिनीहरू पृथ्वीको माथिल्लो दुई तहहरूमा बन्छन् वा तिनीहरू उल्का पिण्डको प्रभावबाट बनेको बताइन्छ । हीराहरू धेरै विस्फोटक रूपमा पृथ्वीको सतहमा आउँछन् । यी हीराहरू इतिहासमा पृथ्वी भित्र भएको सबैभन्दा ठूलो विस्फोटको परिणाम हो । यी विष्फोटका कारण उत्पन्न भएका केही ज्वालामुखीहरूको जरा पृथ्वीमा धेरै गहिरो छ ।
सबै हीरा पारदर्शी हुँदैनन् । केहि हल्का पहेंलो र केहि खैरो पनि छन् । केही हीराहरू पनि रंगीन हुन्छन् र यसलाई 'फ्यान्टेसी' भनिन्छ । रातो, नीलो र हरियो रंगका हीरा लगभग दुर्लभ छन् । सुन्तला, पहेंलो र थोरै पहेंलो हरियो हीरा सबै भन्दा सामान्य छन् ।
तर एक पटक हीरा बनेपछि, तिनीहरूको क्रिस्टल जस्तो संरचनामा कुनै पनि धातुलाई समात्न र सुरक्षित राख्न सक्ने क्षमता हुन्छ । वैज्ञानिकहरूको लागि, यसले पृथ्वीको सबैभन्दा बाक्लो सतहमा पाइने खनिजको झलक दिन्छ । साथै, यसले पृथ्वीको माइलको गहिराइमा कस्तो अवस्था छ भन्ने पनि बताउँछ । निलो हीरा वा निलो हीरा यस अर्थमा धेरै असाधारण छ ।
हाम्रो संसारमा अधिकांश हीराहरू पृथ्वीको १५० किलोमिटरको गहिराइमा बनेका छन् । नीलो हीरा पृथ्वीको सबैभन्दा तल्लो आवरणमा चार गुणा गहिरोसम्म जन्मिन्छ । सन् २०१८ मा भएको एक अध्ययनले यो कुरा खुलासा गरेको हो ।
अमेरिकाको जेमोलोजिकल इन्स्टिच्युटका भूवैज्ञानिक इभान स्मिथले हीरा जस्ता रत्नहरू धेरै महँगो हुन्छन्, त्यसैले तिनीहरू वैज्ञानिक अनुसन्धानको उद्देश्यका लागि पाउन गाह्रो हुने बताउछन् । हीरा मूल्यवान मात्र होइन, शुद्धताको हिसाबले पनि धेरै राम्रो हुन्छ । तिनीहरूमा अरू केही पाउने सम्भावना छैन । हिरा बाहेक, यसको निर्माणको समयमा बनेको अन्य कुनै धातु वा कुनै खनिज पदार्थ यसमा पाइँदैन ।
हीराको यो अपूर्णताले यसको बारेमा वैज्ञानिकहरूलाई थप जानकारी दिन सहयोगी साबित हुन्छ । यद्यपि वैज्ञानिकहरूले यस्ता ४६ वटा नीलो हीराको विश्लेषण गर्न सफल भएका छन्, जसमा केही चीजहरू संलग्न थिए । पृथ्वीमा ४१० देखि ६६० किलोमिटरको गहिराइमा जन्मिएको हुनुपर्छ भन्ने उनीहरुको विश्वास छ । यी मध्ये केही हीरा नमूनाहरूबाट हटाइएका छन्, तिनीहरू ६६० किलोमिटर भन्दा बढीको गहिराइमा बनाइएका छन्। अर्थात्, तिनीहरू पृथ्वीको सबैभन्दा तल्लो आवरणमा जन्मेका छन् । यसरी, यी हीराहरू वास्तविक समय क्याप्सुल साबित भएका छन् ।
अमेरिकन म्युजियम अफ हिस्ट्रीज जेम एण्ड मिनरल फारमका क्युरेटर र भूवैज्ञानिक जर्ज हर्लोले बीबीसी रील नेचुरललाई भने, "हामी पृथ्वीको भित्री भागमा जान सक्दैनौं ।" जहाँ हिरा उत्पादन हुन्छ । यसले सामान्यतया त्यहाँ जे छ त्यसलाई समेट्छ । उनी भन्छन्, एक हिसाबले यो अन्तरिक्षमा अन्वेषण मिसन जस्तै हो । अन्ततः पृथ्वीको सतहमा केही हीराहरू भेटिन्छन्, र हामीले तिनीहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने मौका पाउँछौं ।
निलो हीराको रहस्य:
निलो डायमण्ड लामो समयसम्म इतिहासको रहस्य बनेको छ । हिराको यस्तो अचम्मको रङ किन हुन्छ भन्ने अहिलेसम्म थाहा छैन । अन्ततः यो पत्ता लाग्यो कि यसमा बोरोनको अवशेष छ । यो एक मेटालोइड केमिकल हो, जसमा हीराको बृद्धिको क्रममा यसमा रहेको क्रिस्टल जालीमा प्रवेश गर्ने क्षमता हुन्छ । तर यो रहस्यबाट पर्दा हटेपछि एउटा अड्कल आयो- जब पृथ्वीको तल्लो आवरणमा हीरा बनेको थियो, जहाँ यसको तहमा बोरोन थियो, तब उनीहरूले यो बोरोन कहाँबाट पाए ? यस भू-रासायनिक पजलको जवाफले हामीलाई पृथ्वीको गहिराइको बारेमा पनि संकेत दिन्छ ।
स्मिथको नेतृत्वमा काम गरिरहेको अनुसन्धान समूहले यो अवधारणा ल्याएको हो । बोरोन महासागरको सतहबाट पृथ्वीको गहिरो तहमा गएको बताइएको छ । यो घटना तब भयो जब यसको टेक्टोनिक प्लेटहरू एकअर्का भित्र सर्दै थिए । यो प्रक्रियालाई सबडक्टसन भनिन्छ । हीरा पानीले भरिएको खनिजहरू अवशोषित गरेर गहिरो समुद्रको भुइँमा फैलिन्छ । यो समुद्री प्लेटको क्रस्टमा पनि पुग्छ ।
पृथ्वीको सतहबाट हालसम्म जन्मिएका हीराहरूमा बोरोनको अवशेषहरू फेला पर्दा पानीले भरिएका खनिजहरू पहिले अनुमान गरिएको भन्दा पृथ्वीको गहिरो तहहरूमा गहिरो यात्रा गर्ने सुझाव दिन्छ । यसले धेरै गहिराइमा फरक पानी चक्रको सम्भावनाको संकेत दिन्छ ।
हर्लो भन्छन् कि नीलो हीरा वा नीलो रंगको हीरा सुन्दर र दुर्लभ मात्र होइन तर धेरै रोचक पनि छन् । तिनीहरूले हामीलाई हाम्रो पृथ्वीको बारेमा धेरै सिकाउँछन् ।